ညီလင်းသစ်: December 2011
Posted by ညီလင်းသစ် au 24.12.11 45 comments
အခုလို နှစ်ကုန်ပိုင်းရက်တွေ ရောက်လာပြီဆိုရင် ကျနော်အလုပ်,လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ကြော်ငြာစာရွက် တမျိုးကို ရံဖန်ရံခါ တွေ့ရတတ်ပါတယ်၊ တခြားဟာ ကြော်ငြာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ လက်ပ်တော့ပ် ကွန်ပြူတာ ပျောက်သွားလို့ ပြန်ပေးရင် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကျေးဇူးဆပ်ပါ့မယ်လို့ အသိပေးတဲ့ ကြေငြာစာပါ၊ အဲဒီလို လက်ပ်တော့ပ် ပျောက်သွားသူတွေကလည်း အများအားဖြင့် ပီအိပ်ခ်ျဒီ ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်၊ ပီအိပ်ခ်ျဒီ ကျောင်းသားမှာမှ မကြာခင် စာမေးပွဲဖြေ၊ စာတမ်းဖတ်ရတော့မယ့် နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်နေတာပါ၊ ဒါ့ထက် ပိုဆိုးတာကတော့ ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်စာ တပင်တပန်းနဲ့ ပြုစု၊ ရေးသားထားတဲ့ စာတမ်းအားလုံးက အဲဒီ တစ်ခုတည်းသော လက်ပ်တော့ပ်ရဲ့ ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ် (hard disk) ထဲမှာ ပါသွားတာပါပဲ၊ အဲဒါကြောင့် ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွေမှာ ကပ်ထားတတ်တဲ့ စာရွက်အပိုင်းလေးတွေမှာ လက်ပ်တော့ပ်ကို မနှမြောတဲ့ အကြောင်း၊ ခိုးသွားတဲ့ လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကောက်ရတဲ့ လူပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်လာပေးမယ် ဆိုရင် လက်ပ်တော့ပ်အသစ် တစ်လုံးစာ တန်ဖိုးကို ကျေးဇူးဆပ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ အဓိက လိုချင်တာက ရေးထားခဲ့သမျှတွေ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အဲဒီ ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်လေးပဲ ဖြစ်ကြောင်း..၊ စသဖြင့် ပါလေ့ရှိပါတယ်၊ တချို့ကလည်း ကွန်ပြူတာ ယူသွားတဲ့လူကို စိတ်မဆိုးပါကြောင်း၊ လက်ပ်တော့ပ်ကို ယူထားလို့ရကြောင်း၊ ဟာ့ဒစ်ခ်ထဲက ဖိုင်လ်တွေကိုသာ ပြန်ကူးပေးစေချင်လို့ USB sticks လေးတွေကို ပို့ပေးချင်ကြောင်း၊ လိပ်စာ သို့မဟုတ် ပို့ပေးရမယ့် နေရာကို ကျေးဇူးပြု၍ ပြောစေလိုကြောင်း စသဖြင့် ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်..၊
သွားရင်းလာရင်း အဲဒီလို ကြော်ငြာစာရွက်လေးတွေ ဖတ်ရတဲ့အခါ ပျောက်သွားတဲ့ လူအစား ကျနော်ရင်မော မိပါတယ်၊ စာကြောင်းတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ပူပင်သောကနဲ့ ထိတ်လန့်စိုးရိမ်မှုကို ခံစားလို့ရတယ်၊ အခုခေတ်မှာ အထိုက်အလျောက် ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် တော်တော်တန်တန် လက်ပ်တော့ပ် တစ်လုံးရနိုင်ပေမယ့် နှစ်တွေနဲ့ ချီပြီး သုတေသနလုပ်၊ ရေးသားထားတဲ့ စာတမ်းအပိုင်းအစတွေကတော့ ဘယ်လိုမှ ပြန်ရေးဖို့ ပြန်လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ သလောက်ပါပဲ၊ ပြီးတော့ စာမေးပွဲကလည်း သိပ်မကြာခင်မှာပဲ လာတော့မှာ...၊ အဲဒီလို ကြော်ငြာတဲ့ ကျောင်းသား ဘယ်နှယောက်လောက် သူတို့ရဲ့ လက်ပ်တော့ပ် ဒါမှမဟုတ် ဟာ့ဒစ်ခ်ကို ပြန်ရသလဲတော့ မသိပါဘူး၊ ဒီကာလက ခရစ္စမတ် ကျောင်းပိတ်ရက်၊ နီးလာတဲ့ စာမေးပွဲတွေနဲ့ ရှုပ်နေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ လူပေါင်းစုံ ဝင်ထွက်သွားလာ နေတတ်ပါတယ်၊ ယူသွားတဲ့လူက အပြင်က ဆိုရင်တော့ အခုလို ကြော်ငြာထားတာကိုတောင် သိချင်မှ သိတော့မှာပါ...၊
ကျနော်တို့ ဒီနေ့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခေတ်ဟာ သတင်းအချက်အလက်ခေတ် ဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ၊ နေရာတကာမှာ သိချင်တာတွေကို သိနိုင်သလို အဲဒီလို သိလာတာတွေကိုလည်း သိမ်းဆည်းသိုမှီးဖို့ ကိရိယာ၊ အသုံးအဆောင်တွေက မျိုးစုံပါ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ မိဘဘိုးဘွားတွေ ခေတ်နဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ၊ သိမ်းဆည်းစရာတွေက များလွန်းလှပါတယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ အီးမေးလ် လိပ်စာတွေ၊ အီလက်ထရောနစ် ပြက္ခဒိန်က ချိန်းဆိုထားမှုတွေ၊ အလုပ်ဖိုင်လ်တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ.. ပြောမယ်ဆိုရင် တပုံကြီးပါ၊ အဖေအမေတို့ ခေတ်ကလို ဖုန်းနံပါတ်လေး သုံးလုံးလောက် ခေါင်းထဲမှတ်လိုက်ရင် ပြီးနေတဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့တဲ့အခါ ဦးနှောက်က ထမ်းရတဲ့ ဝန်ဟာလည်း မနိုင်ဝန် ဖြစ်လာခဲ့တယ်၊ အဲဒီအခါ တိုးတက်လာတဲ့ အီလက်ထရောနစ် ကိရိယာတွေထဲမှာ အချက်အလက်တွေ အားလုံးကို မှတ်သားသိမ်းဆည်း ဖြစ်ကြပါတော့တယ်၊
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ အားလုံးက သူ့အလိုလို ပျက်စီးတာ၊ လွတ်ကျတာ၊ အခိုးခံရတာ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ထိတာ ဒါတွေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်လား၊ အဲဒီအခါ စုဆောင်းသိမ်းဆည်း ထားသမျှတွေ အားလုံးဟာ တသက်လုံးမွေးလာတဲ့ကြက် တမနက်နဲ့ ချက်ပစ်လိုက်သလို မိနစ်ပိုင်း အတွင်းမှာ ဆုံးရှုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဆန်တိုရိနီ (Santorini) ဆိုတဲ့ ဂရိကျွန်းကလေး တစ်ခုကို အလည်ရောက်တုန်းက အဲဒီလို အဖြစ်မျိုး ကျနော်ကြုံခဲ့ဖူး ပါတယ်၊ ကျနော်တို့တည်းတဲ့ ရွာကလေးကနေ တောင်ကြောရဲ့ အခြားတဖက်က ရွာတစ်ရွာကို သွားလည်ကြတယ်၊ အဲဒီရွာကလေးကို ရောက်တော့ ကမ်းစပ်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်း ပင်လယ်ရေပြာပြာတွေက ဆွဲဆောင်လှတာက တကြောင်း၊ တောင်ကြောကြီးပေါ်ကို အတက်အဆင်း လုပ်ခဲ့ရလို့ မောပန်းနေတာက တကြောင်းဆိုတော့ ရေကူးချင်စိတ် ပေါက်လာရော၊ လာတုန်းက ရွာထဲကို လည်ဖို့သက်သက်ပဲဆိုတော့ ရေကူးဖို့ အဝတ်အပို မပါပေမယ့် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး စဉ်းစားမနေဘဲ ဝတ်ထားတဲ့ သရီးကွာတား ဘောင်းဘီနဲ့ပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆင်းလိုက်တာပေါ့၊ ရေထဲရောက်လို့ ၅ မိနစ်လောက်ကြာမှ တစုံတခုကို စဉ်းစားမိပြီး စိတ်ထဲမှာ ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ ကိုယ့်ဘောင်းဘီ အိတ်ထဲကို ကိုယ်ပြန်စမ်းဖို့ အဲဒီအကြိမ်လောက် မဝံ့မရဲ ဖြစ်ရတာ အဲဒီအကြိမ်ပဲ ရှိတယ်၊ မရဲတရဲနဲ့ စမ်းလိုက်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်း ဖုန်းက ဆားငန်ရေတွေ တဝကြီး သောက်ပြီးနေခဲ့ပြီ၊ ဘာ back up မှလည်း မလုပ်ထားမိတော့ သွားတာပါပဲ၊ အထက်က ဖြစ်ရပ်တွေမှာလည်း ပူပင်သောက ရောက်ရတဲ့ တခုတည်းသော အကြောင်းအရာက ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်ကို back up မလုပ်ထားမိလို့ ပါပဲ၊
ဒီနေ့ခေတ်လို သူတပါးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ခိုးယူတာ၊ အလွဲသုံးစား ပြုတာတွေ များတဲ့ခေတ်မှာ လုံခြုံရေးဟာ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်၊ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ နောက်ဆုံးပေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေး စနစ်၊ fire wall စနစ်တွေ တပ်ထားပေမယ့်လည်း ၁၀၀% လုံခြုံမယ်လို့ ဘယ်သူမှ အာမ မခံနိုင်ပါဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း သူခိုးသူဝှက်ဘေး၊ မီးဘေး စတာတွေနဲ့လည်း ကြုံတွေ့နိုင်တာပဲ မဟုတ်လား၊ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့် ရဲ့ ကွန်ပြူတာ၊ လက်ပ်တော့ပ်ကို back up လုပ်ထားတာ အကောင်းဆုံး ပါပဲ၊ back up နဲ့ ပတ်သက်လို့ မမေ့နိုင်စရာ အဖြစ်တစ်ခုကိုလည်း ကျနော်ကြုံခဲ့ ပါသေးတယ်၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်နီးပါးက ကွန်ပြူတာတစ်လုံး ဝယ်သုံးတယ်၊ hp အမျိုးအစားပါ၊ အဲဒီတုန်းက hp ကွန်ပြူတာတွေမှာ Operating System (OS) ကို ပြန်ပြီး reinstall လုပ်ဖို့ အပိုစီဒီတွေ မပါ,ပါဘူး၊ ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်ထဲမှာပဲ partition တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တယ်၊ သုံးစွဲသူက ကိုယ့်ဟာကိုယ် စီဒီထဲမှာ ပြန်ပြီး ကူးထားဖို့ လိုပါတယ်၊ အဲဒီလို ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်ပေါ်က OS ကို စီဒီပေါ်ကို back up လုပ်ပြီး ကူးထားဖို့လည်း ကွန်ပြူတာက ခဏခဏ သတိပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်က စီဒီပေါ်ကို ကူးထားတာက အစင်းရာ၊ အခြစ်ရာတွေ ထင်ပြီး ပျက်ချင် ပျက်နိုင်သေးတယ်၊ သူ့ရဲ့မူလ ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်ထဲမှာ ရှိနေတာကမှ ပိုပြီး စိတ်ချရမယ်၊ ကွန်ပြူတာ တခုခု ဖြစ်သည့်တိုင် အနည်းဆုံးတော့ ဒီ OS ထားတဲ့ partition ရှိရာဆီ လာလို့တော့ ရမှာပဲ၊ အဲဒါကြောင့်သာ hp က ဒီလို ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်မှာ ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့-လို့ ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်စွာနဲ့ တွေးပါတယ်၊ အဲဒီလို တွေးပြီးသကာလ ခဏခဏ သတိပေးနေတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်၊ ဒါတင်မကသေးဘဲ ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်ပေါ်က ဖိုင်လ်တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေကိုလည်း ဘာတစ်ခုမှ back up လုပ်မထား ဖြစ်ပါဘူး၊ မိုက်လုံးကြီးခဲ့ပုံက အဲဒီလို...၊ တိုတိုပြောရရင် Anti-virus စနစ် သေသေချာချာ တပ်ထားပေမယ့် တစ်နေ့မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ထိပြီး ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ် တစ်ခုလုံး သုံးမရအောင်ကို ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်၊ reinstall လုပ်ဖို့ စီဒီလည်း မရှိ၊ ဖိုင်လ်တွေ ဓါတ်ပုံတွေလည်း ပျက်စီးနဲ့...၊
အခုတော့ ကျနော် ပျဉ်ဖိုးနားလည် သွားခဲ့ပါပြီ၊ ကျနော့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ back up ဆိုတာက မရှိမဖြစ် အရာ၊ ခေါင်းထဲမှာ အမြဲမြည်နေတဲ့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်း ဖြစ်လာခဲ့ပြီ၊ အထူးသဖြင့် သားကလေး မွေးလာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေ အပါအဝင် ကျနော် ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းသိမ်းချင်တဲ့ အတွက် back up ကို အချိန်ပေးပြီး မမေ့မလျော့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ကွန်ပြူတာတစ်ခု ပျက်စီး၊ ဆုံးရှုံးသွားပြီ ဆိုရင် ဖိုင်လ်တွေ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ အပြင် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု တစ်ခုက ဓါတ်ပုံတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ခရီးသွားတုန်းက ပုံတွေ၊ ကလေးတွေရဲ့ ငယ်ဘဝပုံတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမှတ်တရပုံတွေ၊ မိဘတွေ သက်ရှိထင်ရှား ရှိတုန်းက ပုံတွေ၊ ဒါတွေက ဘယ်လိုမှ ပြန်ပြီး အစားထိုးလို့ မရနိုင်တဲ့၊ 'နင့်'နေအောင် ပေးလိုက်ရမယ့်၊ 'ဟာ'ပြီး ကျန်ခဲ့မယ့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ပါပဲ၊ ဘလော့ဂ်တွေ ဖတ်ရင်းနဲ့လည်း မကြာခဏ ဆိုသလို ဓါတ်ပုံတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့ အကြောင်း ဖတ်ရတိုင်း ကျနော်ကိုယ်ချင်းစာမိ ပါတယ်၊
အလျင်းသင့်လို့ ကျနော် back up လုပ်ပုံကို ပြောပြချင်ပါတယ်၊ ပထမဆုံး ဓါတ်ပုံတွေကို ကင်မရာကနေ ကွန်ပြူတာထဲကို USB ကေဘယ်လ်ကြိုး၊ ဒါမှမဟုတ် HDMI ကြိုးနဲ့ ပြောင်းထည့်ပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် memory ကဒ်ကို ကျနော်က ခဏခဏ အသွင်းအထုတ် မလုပ်ချင်ပါဘူး၊ USB port ပျက်သွားရင် အသက်ကယ် အနေနဲ့ momory ကဒ်ကနေ တိုက်ရိုက်ကူးလို့ ရသေးတယ်၊ memory ကဒ်က စပြီး ပျက်သွားရင်တော့ အတော်လေး ခဲယဉ်းသွားမယ် မဟုတ်လား၊ ဒါ့ကြောင့်ပါ...၊ ကွန်ပြူတာထဲကို ပုံတွေ ရောက်သွားပေမယ့်လည်း ကင်မရာထဲက ပုံတွေကို မဖျက်ပါဘူး၊ အဲဒီအချိန် ကွန်ပြူတာ ပျက်သွားခဲ့ရင် မြွေပါလည်းဆုံး၊ သားလည်းဆုံး ဖြစ်မယ့်ကိန်းပါ၊
ဒုတိယ အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် external hard disk တစ်ခုနဲ့ ပုံတွေကို ချက်ချင်း back up လုပ်ပါတယ်၊ အချိန်မရရင် တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း လုပ်ပါတယ်၊ ဒီ ပြင်ပဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်က နောက်တိုးတဲ့ ဖိုင်လ်အသစ်တွေကိုပဲ ရွေးပြီးကူးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲပါတဲ့ ဟာပါ၊ အဲဒါပြီးတော့ နောက်ထပ် ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ် တစ်ခုနဲ့ ဖိုင်လ်အသစ်တွေကို ထပ်ကူးပါတယ်၊ ဒီတခါတော့ ဖိုင်လ်တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေး copy-paste လုပ်ပြီး ကူးပါတယ်၊ ဒီအဆင့်မှာ ဖိုင်လ်တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေကို ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ် ၂ ခုနဲ့ ကူးပြီးသွားလို့ ကင်မရာထဲက ပုံတွေကို လိုအပ်ရင် ဖျက်ပစ်ပါတယ်၊ အဲဒါပြီးတော့ နောက်ထပ် ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ် ၂ ခုနဲ့ အသစ်ရောက်လာတဲ့ ပုံတွေသာ မကဘဲ အရင်က ရှိပြီးသား ပုံတွေပါတဲ့ ဖိုလ်ဒါတွေ အားလုံးကို ကော်ပီလုပ်ပါတယ်၊ ဒီအတွက် ၂ TB စီရှိတဲ့ ဒစ်ခ်တွေကို သုံးပါတယ်၊ အဲဒီလို external hard disk ၄ ခုနဲ့ back up လုပ်ပြီးရင်တော့ လတ်တလော လုပ်ရမယ့်ဟာ ပြီးပြီလို့ ဆိုရမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် သေချာအောင် ၄ လတစ်ခါလောက် ဒီဗီဒီတွေနဲ့ back up ထပ်လုပ်ပါတယ်၊ အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျနော့်အတွက် မဆိုးပါဘူး၊ အွန်လိုင်း ဆာဗာတွေမှာ back up လုပ်လို့ရတာတွေ ရှိပေမယ့် ကျနော်ကတော့ သံသယ ကြီးတယ်ပဲဆိုဆို အခုလို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဒစ်ခ်တွေ အများကြီးနဲ့ လုပ်ရတာကိုပဲ ပိုနှစ်သက်ပါတယ်၊
တစ်ခုရှိတာက အခုလို ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်တွေ အများကြီးနဲ့ back up လုပ်ထားပေမယ့် အဲဒါတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ တစုတဝေးတည်း ထားရင်လည်း သိပ်တော့ အဓိပ္ပါယ် မရှိပါဘူး၊ အဲဒါကြောင့် back up ဒစ်ခ်တစ်ခုကို အလုပ်မှာထားတယ်၊ နောက်ထပ် ဒစ်ခ်တစ်ခုကိုတော့ အလုပ်လည်း မဟုတ်၊ အိမ်လည်း မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ ထားပါတယ်၊ ဟိုတလောတုန်းက ဘလော့ဂ်တွေမှာ မဲလ်ဝဲ ကိစ္စတွေ ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက် ကျနော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကိုလည်း ပုံမှန် back up လုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကိုတော့ blogger ကနေ တပါတည်းပေးထားတဲ့ Setting -> export လုပ်နည်းနဲ့ပဲ လုပ်ပါတယ်၊ သူက ဘလော့ဂ်ကို xml ဖိုင်လ်အနေနဲ့ သိမ်းပါတယ်၊ ပို့စ်တွေနဲ့ ကွန်မန့်တွေပါ သိမ်းပေးပါတယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေတော့ သိမ်းပေးပုံ မရပါဘူး၊ မတွေ့မိဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံတွေက ကျနော့်ရဲ့ back up ဒစ်ခ် ၄ ခုထဲမှာ အပြည့်ဆိုတော့ ဒါက ပြဿနာ မရှိပါဘူး၊ အကြောင်း တစုံတခုကြောင့် ဘလော့ဂ်ပျက်သွားခဲ့ရင် ဘလော့ဂ်အသစ်ဖွင့်ပြီး ဒီ xml ဖိုင်လ်ကို import ပြန်လုပ်လိုက်ရုံ ပါပဲလို့ ဆိုတယ်၊ တခါမှတော့ မစမ်းဖူးသေးဘူး၊ စမ်းခွင့်တော့လည်း မကြုံချင်ပါဘူး၊ ဒီ export back up နည်းက wordpress လို တခြား ပလက်ဖောင်းတွေကို ရွှေ့ဖို့အတွက် ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေဘူး ဆိုလား ပြောသံကြားဖူးတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်က အဲဒီလို ပြောင်းမယ့်သူလည်း မဟုတ်တော့ အကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး၊
ဒီကနေ့ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေ အလယ်မှာ back up လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေ၊ back up လုပ်ရင် သုံးရမယ့် ကိရိယာတွေက မျိုးစုံပါပဲ၊ back up လုပ်ရတာ ဘာမှမကြာမှန်း၊ လုပ်သင့်မှန်းလည်း သိနေပေမယ့် ကျနော်တို့တွေ တခါတရံမှာ သတိလက်လွတ် နေမိတတ်ကြပါတယ်၊ အဲဒီလို မေ့လျော့နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ကျနော်တခါက ဆုံးရှုံးခဲ့သလို မဆုံးရှုံးစေဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း သက်သက်ပါ၊ နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ ဆိုရင် အဆုံးအရှုံးက ကြီးမားနိုင်ပါတယ်၊ မိတ်ဆွေတို့ဆီမှာလည်း လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး အများကိုလည်း ဝေမျှချင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေများ ရှိခဲ့ရင် တဆိတ်လောက် ပြောပြခဲ့ပါဦးလား...။ ။
၁၉ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
Posted by ညီလင်းသစ် au 19.12.11 27 comments
ဒီကနေ့ ကမ္ဘာမှာတိုးတက်ဆန်းပြားလာတဲ့ တီထွင်မှုတွေနဲ့အတူ တပါတည်း ပါလာတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အန္တရာယ်တွေ ရှိပါတယ်၊ တချို့အရာတွေကို အန္တရာယ်မှန်း ချက်ချင်းသိပြီး ရှောင်နိုင်ပေမယ့် တချို့အရာတွေကတော့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အမြဲထိတွေ့ နေရသည့်တိုင် အန္တရာယ်ရှိမှန်း မသိနိုင်တာ မျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်၊ အဲဒီလို မမြင်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တစ်ခု အကြောင်းကို ကျနော်ပြောပြ ချင်ပါတယ်၊ သူကတော့ ဘီပီအေ (BPA) လို့ အတိုကောက် ခေါ်ကြတဲ့ Bisphenol A ပါပဲ...၊
ဘီပီအေဆိုတာ ပိုလီကာဗွန်နိတ် (polycarbonate) ပလပ်စတစ်အမာနဲ့ အပူဒဏ်ခံ ပလပ်စတစ်အမာ (thermosetting epoxy resin) တို့ကို ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးတဲ့ ဓါတုဗေဒ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်၊ သူ့ကို ၁၉ ရာစုကုန်လောက် ကတည်းက စတင်ပြီး စမ်းသပ်ဖော်ထုတ် နိုင်တာ ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း အကြီးအကျယ် အသုံးပြုလာတာ ကတော့ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန် နှစ်တွေမှာ ပလပ်စတစ်ထုတ်တဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာပါ၊ ပြီးတော့ တစထက်တစ တွင်ကျယ်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဆားကစ်ပြားတွေမှာ လျှပ်ကာပစ္စည်း (insulator) အဖြစ်လည်း အသုံးပြုလာ ကြတယ်၊ အဲဒီလို သုံးကောင်းကောင်းနဲ့ နေရာတကာမှာ သုံးလာ လိုက်ကြတာ အခုတော့ ဘီပီအေက ပေးတဲ့ ပြဿနာဟာ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားရတော့မယ် အချိန်ကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ...၊
အကြောင်းကတော့ ဘီပီအေဟာ Endocrine disruptor လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ဒုက္ခပေးသူ ဖြစ်လို့ပါပဲ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဘီပီအေ ရောက်သွားတဲ့အခါ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု စနစ်နဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကို သူက ဖျက်ဆီးပစ်နိုင် ပါတယ်၊ တကယ်တော့ ဘီပီအေဟာ အခုလို ဟော်မုန်းဓါတ်တွေအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာ အချိန်တော်တော် ကြာကြာကတည်းက သိထားကြပေမယ့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ပမာဏ အများကြီး ဝင်ရောက်သွားမှသာ ဒါဟာ အန္တရာယ်အဆင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်မှတ်ထားခဲ့ ကြတာပါ၊ ဒါပေမယ့် ၁၉၉၆ မှာ မစ်ဆူရီ တက္ကသိုလ်က ဓါတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာ ကြွက်တွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်တော့ အလွန်နည်းပါးတဲ့ ဘီပီအေ ပမာဏဟာလည်း ကောင်းကောင်း အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်လို့ အမှတ်မထင် တွေ့ရှိလိုက်ရတယ်၊ သားမွေးတော့မယ့် ကြွက်မကြီးကို ဘီပီအေ ပမာဏ မဆိုစလောက်ကလေး သုံးလေးရက်လောက် ပေးလိုက်တယ်၊ နောက် မွေးလာတဲ့ ကြွက်သားပေါက်လေးတွေကို စမ်းကြည့်တဲ့အခါ အထီးလေးတွေရဲ့ မျိုးပွားဟော်မုန်း စနစ်ဟာ ပျက်စီးနေတာကို တွေ့လိုက်ရတာပါ၊
နောက် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အခြားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာ ဘီပီအေ ပမာဏကိုလိုက်လို့ ကြွက်မလေးတွေမှာ ခရိုမိုဆုမ်း ကစင့်ကလျား ဖြစ်မှုကိုလည်း တွေ့လာကြတယ်၊ ဒါကိုကြည့်ပြီး အဲဒီပမာဏ အတိုင်းသာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ သက်ရောက်ခဲ့ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေ အဖို့ သားလျှော၊ သားပျက်တာတွေ ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကောက်ချက်ဆွဲကြ ပါတယ်၊ အဲဒီနောက်မှာတော့ စမ်းသပ်မှုတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုလုပ်ပြီး ဘီပီအေကို အလေးအနက်ထား သုတေသန လုပ်လာကြတယ်၊ ကြွက်တွေတင် မဟုတ်တော့ဘဲ အခြား တိရိစ္ဆာန်ငယ်လေး တွေကိုပါ သုံးပြီး ဘီပီအေ ပမာဏ မျိုးစုံနဲ့ စမ်းသပ်ကြပါတယ်၊ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းပေါင်းစုံက ရလာတဲ့ ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေအပေါ် စမ်းသပ်မှု အဖြေတွေကို လူသားတွေ အတွက် ဆင့်ပွားတွက်ချက် ကောက်ချက် ဆွဲလိုက်တဲ့အခါ တွေ့ရှိချက်တွေက ကြောက်စရာပါပဲ၊
လူကို ဘာတွေ ဒုက္ခ ပေးနိုင်သလဲ
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘီပီအေ ပမာဏ များလာတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ရင်သားကင်ဆာနဲ့ အမျိုးသားတွေ အတွက် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ မွေးလာတဲ့ ယောက်ျားလေး ကလေးငယ်တွေမှာ လိင်အင်္ဂါ ကောင်းစွာ မဖွံ့ဖြိုးတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ မျိုးပွားဟော်မုန်းတွေကို ထိခိုက်တာဖြစ်လို့ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ ပိုပြီးခက်ခဲတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ မိန်းကလေးငယ်တွေမှာ အရွယ်မတိုင်မီ အများကြီးစောပြီး အပျိုဖော်ဝင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အဝလွန်ရောဂါနဲ့ ဆီးချိုရောဂါတွေ လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့ကျတာတွေ၊ hyperactivity လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်အမင်း လှုပ်ရှားတက်ကြွတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်၊ ဘီပီအေကြောင့် ဒါတွေဖြစ်မယ်လို့ ကျိန်းသေပြောတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒါတွေဖြစ်ဖို့ အလားအလာ အများကြီးရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ...၊
အဲဒီလို အသံတွေ ကျယ်လောင်လာတဲ့အခါ ဘီပီအေကိုသုံးပြီး ပလပ်စတစ် ထုတ်လုပ်နေတဲ့ စက်ရုံကြီးတွေ၊ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ကန့်ကွက်သံတွေ ထွက်လာပါတော့တယ်၊ အခုပြောနေတဲ့ အချက်တွေက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျိန်းသေတာ မဟုတ်ဘူး၊ လုပ်နေကြပါတယ် ဆိုတဲ့ သုတေသန တွေကလည်း အကန့်အသတ်တွေ အများကြီး ရှိကြတယ်၊ စမ်းသပ်မှု တွေကလည်း အပြည့်အဝ ယုံကြည်ရမယ်လို့ ဘယ်သူက အာမခံမှာလဲ စသဖြင့်ပေါ့....၊ ပြီးတော့ သူတို့ကလည်း တန်ပြန် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ကြတယ်၊ ရယ်စရာကောင်းတာ တစ်ခုက သူတို့ စပွန်ဆာပေးပြီး လုပ်ခိုင်းတဲ့ သုတေသန စမ်းသပ်ချက် တွေအားလုံးက ဘီပီအေဟာ လူသားတွေအတွက် အန္တရာယ်လုံးဝ မရှိပါဘူးလို့ တညီတညွတ်တည်း အသံ ထွက်တာပါပဲ၊ စီးပွားရေးသမားကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် ဒီလိုပဲ ရှိနေမယ် ထင်ပါရဲ့...၊
ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘီပီအေ ဒြပ်ပေါင်းက လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရော ရှိနေပြီလား ဆိုပြီး ဆက်လက် စစ်ဆေးကြတယ်၊ အမေရိကားနဲ့ ဥရောပက ကျား၊မ အသက်အရွယ် မျိုးစုံရဲ့ ဆီးတွေကို ဓါတ်ခွဲကြည့်တော့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရှိနေတာကို ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ တွေ့လိုက်ရတယ်၊ များလွန်းတဲ့ ပမာဏပါပဲ၊ တကယ်လည်း ကျနော့်အလုပ်က ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ရေနမူနာတွေကို စစ်ဆေးတိုင်း ဘီပီအေကို အမြဲလိုလို တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်၊ ဒါဆိုရင် အရှေ့တိုင်းက လူတွေမှာရော...? သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာလည်း ဘီပီအေ ဒြပ်ပေါင်း ရှိနေနိုင်သလား လို့မေးရင် မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲပါပဲလို့ ဖြေရမှာပါ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနေ့ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာ နေကြတဲ့သူ အယောက်တိုင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘီပီအေဟာ နေရာယူနေပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ၊ အကြောင်းကတော့ ကျနော်တို့ နိစ္စဓူဝ ထိတွေ့နေရတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ ဘီပီအေနဲ့ မကင်းနိုင်လို့ ပါပဲ၊
ဘယ်ပစ္စည်းတွေမှာ ဘီပီအေ ပါသလဲ
အချိုရည်ဘူးတွေ၊ ဘီယာဘူးတွေရဲ့ အတွင်းဖက်မှာ သုတ်ထားတဲ့ ပလပ်စတစ် အလွှာထဲမှာ ဘီပီအေ ပါတယ်၊ ရေခဲသေတ္တာတွေ၊ ပန်းကန်ဆေးစက်တွေ၊ ဖုန်စုပ်စက်တွေ ထဲက လျှပ်စစ်ဆားကစ်နဲ့ ပလပ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ဘီပီအေ ပါတယ်၊ ဥယျာဉ်ခြံသုံး စိုက်ပျိုးရေး ကိရိယာတွေကို ဘီပီအေ ပါတဲ့ ပလပ်စတစ်တွေနဲ့ လုပ်ကြတယ်၊ အိမ်မှာခင်းတဲ့ လီနိုလီယမ် ပလပ်စတစ် အခင်းမှာ ဘီပီအေပါတယ်၊ ဆယ်လိုတိတ်တွေမှာ၊ ကော်ထဲမှာ၊ ပစ္စည်းတွေ ထုပ်ပိုးလေ့ရှိတဲ့ ကပ်ထူစက္ကူပုံးတွေမှာ သုတ်တဲ့ ဆေးထဲမှာ၊ မျက်မှန်ကိုင်းနဲ့ မျက်ကပ်မှန် တချို့ထဲမှာ၊ အများပြည်သူ သောက်ဖို့ထားကြတဲ့ ၂၀ လီတာဝင် ပလပ်စတစ် ရေပုံးကြီးတွေ ထဲမှာ၊ ဧည့်ခန်းအလှဆင် ပလပ်စတစ် ပစ္စည်းတွေထဲမှာ၊ မြန်မာပြည်မှာ အရမ်းသုံးကြတဲ့ မယ်လမင်း (melamine) ပလပ်စတစ် ထမင်းစား ပန်းကန်နဲ့ ခွက်တွေထဲမှာ၊ စီဒီတွေ ဒီဗီဒီတွေထဲမှာ...၊ တကယ့်ကိုမှ အများကြီးပါပဲ၊ နောက်ဆုံး စူပါမားကက်တွေမှာ ဈေးဝယ်ရင် ငွေရှင်းကောင်တာက ပြန်ပေးတဲ့ ကျသင့်ငွေ စက္ကူဖြတ်ပိုင်းလေးတွေ မှာတောင်မှ ဘီပီအေ ပါ,ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်ညှိုးထိုး မလွဲပါဘူး၊ အဆိုးဆုံးနဲ့ ထိတ်လန့်ဖို့ အကောင်းဆုံးကတော့ ကလေးငယ်လေးတွေ စို့တဲ့ ပလပ်စတစ် နို့ဘူးတွေထဲမှာပါ တွေ့ရတာပါပဲ...၊
ဒီနေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်၊ ကောင်းပြီ...၊ အဲဒီ ဘီပီအေဒြပ်ပေါင်းက ကျနော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ပမာဏ ဘယ်လောက်ဆိုရင် လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေ နိုင်သလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ၊ ဒီနေ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊ မူဝါဒနဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ ရေးဆွဲမယ့် အာဏာပိုင်တွေ၊ ဘီပီအေပါတဲ့ ပလပ်စတစ် ထုတ်လုပ်သူတွေ အားလုံး အကျိတ်အနယ် ဆွေးနွေးငြင်းခုံ နေကြတာလည်း အဲဒီအချက်ပါပဲ၊ လောလောဆယ်တော့ သဘောတူညီမှု မရကြသေးသလို ဒီမေးခွန်းကိုလည်း ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မဖြေနိုင်သေး ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကိန်းဂဏန်း တစ်ခု သတ်မှတ်ဖို့အတွက် လုပ်ရမယ့် အဆင့်တွေက များလွန်းလို့ပါပဲ၊ ဓါတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးချက်တွေ အရ ဘီပီအေဟာ အန္တရာယ်ရှိတာ လုံးဝသေချာပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ ဘယ်လောက် ပမာဏရှိရင် လူသားတွေအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုက ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်း ရှိနိုင်မလဲဆိုတာ အတော်ပြောရခက်တဲ့ ကိစ္စပါ၊ အချိန်အများကြီးယူပြီး လူထုကျန်းမာရေး အနေနဲ့ ကွင်းဆင်းလေ့လာဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်၊ လောလောဆယ် လုပ်နိုင်တာက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘီပီအေ ပမာဏများတဲ့ လူတွေကို လေ့လာပြီး သူတို့မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါတွေကို ဆက်စပ်တွက်ချက်၊ ဓါတ်ခွဲခန်း အဖြေတွေနဲ့ ညှိယူရတာပဲ ရှိပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ရောဂါဘယတွေ ပိုပြီးထူပြောလာတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ရင်သားကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတွေ ပိုပြီး ဖြစ်လာကြတာ၊ ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ကျဆင်းလာတာ၊ မိန်းကလေးငယ်တွေ အပျိုဖော်ဝင်ချိန် စောသထက် စောလာတာ.. စတာတွေက ငြင်းမရတဲ့ သက်သေတွေပါပဲ၊ ဒါတွေဖြစ်ရတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအချက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်၊ အဲဒီအထဲမှာ ပလပ်စတစ်တွေ၊ သံဘူးတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ဘီပီအေလိုမျိုး ဓါတုဗေဒ ဒြပ်ပေါင်းတွေဟာလည်း အဓိက အကြောင်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ၊ ကဲ..ဒါဖြင့် ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ...?
ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဘယ်လိုဝင်ရောက် သလဲ
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေက ဘီပီအေကို လုံးဝတားမြစ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် လျှော့ချတာ အစရှိတဲ့ တိကျရေရာမှု တစ်ခုခု မလုပ်နိုင်သေးခင်မှာ ကျနော်တို့က ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ လျှော့ချကာကွယ်လို့ ရပါတယ်၊ မနှစ်က လောလောလတ်လတ် လုပ်ထားတဲ့ သုတေသန တစ်ခုမှာ လူ ၂၀ ကို ရွေးပြီး သူတို့ပုံမှန် စားသောက်ပုံအတိုင်း စားသောက်စေတယ်၊ အဲဒီလူတွေက ပလပ်စတစ်နဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ရေခဲရိုက် အစားအစာတွေ၊ သံဘူးနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ အစားအသောက်၊ အချိုရည် စတာတွေကို ပုံမှန်ဝယ်စားလေ့ ရှိကြသူတွေပါ၊ တစ်ပတ်အကြာမှာ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဘီပီအေ ပမာဏကို တိုင်းတာ မှတ်သားတယ်၊ ပြီးတော့ နောက်တစ်ပတ်မှာ သူတို့ကို သံဘူးတွေ၊ ပလပ်စတစ်တွေနဲ့ လုံးဝကင်းတဲ့ အစားအသောက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေကိုပဲ ချက်ကျွေးတယ်၊ ပြီးတော့ တခါ တိုင်းတာကြ ပြန်တယ်၊ အဲဒီအခါ ဒီလူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘီပီအေ ပါဝင်နှုန်းက ၅၀ ကနေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျသွားတာ တွေ့ရတယ်၊ အထက်ပါ အချက်တွေကို အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဘီပီအေ အများဆုံး ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ နည်းဟာ သံဘူးတွေ၊ ပိုလီကာဗွန်နိတ် ပလပ်စတစ်တွေနဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ အစားအသောက်၊ အရည်တွေကနေ ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချလို့ ရပါတယ်၊
ဘယ်လို ကာကွယ်ကြ မလဲ
သံဘူးတွေရဲ့ အတွင်းဖက်မှာ အစားအသောက်နဲ့ သံနဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ စေဖို့ ခံထားတဲ့ ပလပ်စတစ် အလွှာကနေ ဘီပီအေက အစားအသောက်ထဲကို တဖြည်းဖြည်း စိမ့်ဝင်တာဖြစ်လို့ ဖြစ်နိုင်ရင် သံဘူးနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ အရည်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ အထူးသဖြင့် အက်ဆစ်ဓါတ်ဖြစ်တဲ့ အချဉ်ဓါတ်ပါတဲ့ ဟာတွေပါ၊ ဥပမာ- ခရမ်းချဉ်သီး သံဘူးမျိုး..၊ ဂျပန်မှာတော့ အခုနောက်ပိုင်း သံဘူးတွေထဲမှာ ဘီပီအေ မပါတဲ့ PET အမျိုးအစား ပလပ်စတစ် အလွှာကို အစားထိုး သုံးလာကြပါတယ်၊
သံဘူးတွေနဲ့အတူ တပါတည်း အရေးပါတဲ့ ဘီပီအေ ရင်းမြစ်နောက်တစ်ခုကတော့ ပလပ်စတစ်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လို ပလပ်စတစ် ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာ မက်မက်စက်စက် ပျော်ဝင်နေမိတဲ့ ကျနော်တို့အဖို့ ပလပ်စတစ်ကို လုံးဝရှောင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒီတော့ ဘီပီအေ၊ Phthalates စတဲ့ ဓါတုဒြပ်ပေါင်းတွေ အများဆုံး ပါလေ့ရှိတဲ့ ပိုလီကာဗွန်နိတ် (Polycarbonate) အမျိုးအစား ပလပ်စတစ်နဲ့ ပီဗီစီ (PVC) အမျိုးအစား ပလပ်စတစ်တွေကို အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ဖို့ပါပဲ၊ အဲဒီ ပလပ်စတစ် ၂ မျိုးကို သိနိုင်ဖို့က ပလပ်စတစ် မျိုးခွဲကုဒ် (Plastic Identification Code) ကိုကြည့်နိုင် ပါတယ်၊ ပလပ်စတစ်နဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာ အဲဒီမျိုးခွဲကုဒ်တွေကို မထည့်မနေရ ထည့်ကြရ ပါတယ်၊ ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ကုဒ်တွေကို အောက်ကပုံအတိုင်း တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်၊
အားလုံးပေါင်း ၇ ခုရှိပြီးတော့ ပီဗီစီက ၃၊ ပိုလီကာဗွန်နိတ်က ၇ ဖြစ်ပါတယ်၊ ပိုလီကာဗွန်နိတ်က "O" ဆိုတဲ့ Other အမျိုးအစားအောက်မှာ ပါဝင်ပါတယ်၊
အိမ်မှာ ပလပ်စတစ်ခွက်တွေ၊ ပန်းကန်တွေ သုံးရင်လည်း အစားအသောက် နွှေးဖို့ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲကို မထည့်မိဖို့ လိုပါတယ်၊ ပန်းကန်ဆေးစက်ထဲကို ပလပ်စတစ်ခွက်တွေ ထည့်မဆေးရင် ပိုပြီးကောင်းပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မယ်လမင်းပန်းကန် (melamine) တွေ သုံးတဲ့အခါ အစားအသောက် ပူပူလောင်လောင်တွေ မထည့်ဖို့ပါ၊ အကြိမ်ကြိမ် ရေနွေးထည့်သောက်ထားလို့ အရောင်တွေပြောင်း၊ ဝါကျင့် နေတဲ့ မယ်လမင်း ရေနွေးခွက်တွေကို မြင်မိတိုင်း ကျနော် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရမြဲပါပဲ၊ ရေနွေးကြမ်းကို ကြွေခွက်နဲ့ ထည့်သောက်ရင် သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် 'တန်' တာမို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကလေးတွေအတွက် နို့ဘူးကို BPA-free စာတန်းပါတဲ့ အာမခံ နို့ဘူးတွေ ဝယ်သုံးဖို့ ပါပဲ၊ ဒီဖက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ လွယ်လင့်တကူ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ...၊
အပြစ်မဲ့တဲ့ ရင်သွေးလေးတွေကို ဒီကမ္ဘာထဲ ခေါ်လာပြီး သူတို့အတွက် ကျနော်တို့ ထားခဲ့မယ့် ကမ္ဘာကြီးက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ယိုယွင်းဆုတ်ယုတ် လာတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ကဏ္ဍမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တီထွင်မှု၊ တိုးတက်မှု နဲ့အတူ ကြိုတင်မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပါလာတတ်တာ အနည်းနဲ့အများ ဆိုသလို ကျနော်တို့ တွေ့ရမှာပါ၊ ဒီလို ဆိုးကျိုးတွေကို မြင်လို့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု တွေကို တဗျစ်တောက်တောက် အပြစ်ပြောပြီး ကျောက်ခေတ်မှာပဲ ထိုင်ပြီး ကျန်ခဲ့ချင်လို့ မရပါဘူး၊ အကောင်းဆုံးကို တီထွင်ရင်းနဲ့ အဆိုးတွေ ပါလာရင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် သိအောင်လုပ်၊ သိလာသလောက် ကြိုးစားကာကွယ်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်၊ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်တယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးရတော့မှာ ပါပဲ...။ ။
၁၁ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
Posted by ညီလင်းသစ် au 11.12.11 28 comments
Labels: Analysis, Miscellaneous
မနေ့ညက အဲဒီရုပ်ရှင် သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်၊ လူများ,မများ မသိနိုင်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်မစမီ နာရီဝက် ကျော်ကျော်လောက် ကတည်းက ကြိုရောက်နေ ဖြစ်တယ်၊ လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ တန်းစီရင်း ခုံနေရာ ဘယ်လောက် ကျန်သေးသလဲ ပြတဲ့ မော်နီတာကို ကြည့်လိုက်တော့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ကို ကျန်နေသေးတာ တွေ့ရတယ်၊ ဒါနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဖြစ်သွားတယ်..၊ ပြမယ့် ခန်းမထဲကို ဝင်လို့ရပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျနော်တို့ ဝင်ထိုင်နေလိုက်ပြီး နည်းနည်းစီ ဝင်လာနေတဲ့ လူတွေကို ငေးကြည့်နေ မိတယ်၊ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဒီလိုဇတ်ကားမျိုးကို လာကြည့်သူတွေဟာ ဘယ်လိုလူမျိုး တွေများ ဖြစ်နိုင်မလဲလို့ အရမ်း သိချင်နေမိတယ်၊ မြန်မာပြည်ကို ရောက်ဖူးသူတွေလား၊ ဒါမှမဟုတ် မကြာခင်မှာ သွားမယ့်သူတွေလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဒုက္ခနွံထဲက မတက်နိုင်သေးတဲ့ နိုင်ငံလေးနဲ့ အဲဒီအထဲက အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အကြောင်း ပိုပြီး သိချင်သူတွေ များလား၊ ဒါမှမဟုတ် Luc Besson ဘာပဲရိုက်ရိုက် ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုသူတွေလား...၊
ကျနော့်စိတ်ထဲ တွေးနေမိတာကို ဘေးက မအိမ်သူကို ပြောတော့ အင်မတန် လက်တွေ့ကျတဲ့ အကြံဥာဏ်ကို ပေးတယ်၊ 'သိချင်ရင် လိုက်မေးကြည့် ပါလား' တဲ့..၊ ဝင်လာသူတွေ ကတော့ ကျနော် မျှော်လင့်ထားသလို သက်လတ်ပိုင်းနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေ များတယ်၊ မြန်မာ တစ်ယောက်တလေများ ကံကောင်းစွာနဲ့ ပါလာမလားလို့ တစ်ယောက်မှ အလွတ်မပေးဘဲ ထိုင်ကြည့်နေသေးတယ်၊ အာရှသူလို့ ယူဆရတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရတာက လွဲရင် ကျန်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေက အနောက်တိုင်းသား တွေချည်းပါပဲ၊ ဒီလို ရုပ်ရှင်မျိုးကို ကြည့်ပြီး ပြန်အထွက်မှာ တခြားမြန်မာ လူမျိုးတွေရဲ့ အမြင်ကို ကြားချင်၊ သိချင်မိတယ်၊ အဲဒီလိုနဲ့ ခန်းမထဲမှာ မီးတွေ မှောင်သွားခဲ့တယ်....၊
ဗိုလ်ချုပ်က သူ့သမီးလေးကို အစဉ်အလာ ကြီးခဲ့တဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြောပြနေတဲ့ အခန်းနဲ့ ဇတ်လမ်း စ,ပါတယ်၊ အဲဒီ အခန်းမှာ ပုဂံရဲ့ အရုဏ် တက် မြင်ကွင်းတွေကို ကြိုကြားကြိုကြား ညှပ်ပြီး ပြသွားတယ်၊ ပုဂံဟာ မြင်ကွင်းကျယ် ပိတ်ကားပေါ်မှာ ကြည့်ရတာ ပိုပြီး ကျက်သရေ ရှိနေသလိုပဲ၊ အဲဒီနောက်တော့ အတွင်းဝန်ရုံး လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှု၊ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဒေါ်ခင်ကြည် နေမကောင်းလို့ မြန်မာပြည် ပြန်လာရတဲ့ အမေစု အခန်းတွေကို ပြပါတယ်၊ ပြီးတော့ ၈၈ အရေးတော်ပုံ၊ NLD ဖွဲ့စည်းမှု၊ ရွှေတိဂုံ ညီလာခံ.. စတာတွေ ဆက်လာပါတယ်၊ ဒီအခန်းတွေကို ပြတဲ့အခါ အများသိတဲ့ အတိုင်း ယိုးဒယားနယ်စပ်မှာ တူနိုင်သလောက် အတူဆုံး ဆက်တင်လုပ်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ အခန်းတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့က တကယ့်နေရာတွေကို ရောမွှေပြီး ပြသွားတယ်၊ ဒီဇတ်ကား ရိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါ ဘာမှ မစသေးခင် ဒါရိုက်တာ Luc Besson နဲ့ အဖော် ၂ ယောက်က မြန်မာပြည်ကို လာပြီး ရှုခင်း၊ မြင်ကွင်းတွေကို ကင်မရာ အသေးလေးနဲ့ ၁၇ နာရီစာ ရိုက်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ အခု အဲဒီရှုခင်းတွေကို ဒီလို နေရာတွေမှာ ပြန်သုံးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ အမေစုရဲ့ အမှတ် ၅၄ အိမ်ကိုတော့ ယိုးဒယား နယ်စပ်မှာ တပုံစံတည်း ပြန်ဆောက်ပြီး ရိုက်ပါတယ်၊
ဇတ်လမ်းက အမေစုအဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ မီရှဲလ်ယိုး (Michelle Yeoh) နယ်တွေကို စည်းရုံးရေး ခရီးထွက်တာ၊ နောက်တော့ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေ ဆက်ပြတယ်၊ မီရှဲလ်ယိုးက ဇတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ မြန်မာစကားကို သွက်သွက်လက်လက် ပြောနိုင်အောင် ကျင့်ထားတာ တွေ့ရပေမယ့် လေသံကတော့ အတော်လေး ဝဲတယ်၊ ဒီနေရာမှာ သူ့အသံနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူ နိုင်မယ့် မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို စကားပြောခိုင်းပြီး နောက်ခံအသံ ထပ်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျနော်ကတော့ သူကိုယ်တိုင် ပြောတာကိုပဲ ပိုသဘောကျတယ်၊ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ အားထုတ်မှု မဟုတ်လား၊ အစ တစ်ကြောင်း၊ နှစ်ကြောင်းလောက်မှာ နားထဲ တမျိုးဖြစ်ပေမယ့် နောက်တော့လည်း အသားကျ သွားပါတယ်၊ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ဇတ်ဝင်ခန်းတွေကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ပီပြင်အောင် ကြိုးစားထားတာ တွေ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် တချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေက မျက်နှာကြည့်လိုက် တာနဲ့ ထိုင်းလူမျိုးမှန်း သိသာသလို တချို့ကလည်း မြန်မာစကား ပြောတဲ့လေသံ အရမ်း ဝဲလွန်းတာ သတိထား မိတယ်၊ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပြရင် အများအားဖြင့် ရက်စက်၊ ကြမ်းတမ်းမှု၊ ကောက်ကျစ်မှုကို ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာ တွေ့ရတယ်၊ ဒီအတိုင်း ဟုတ်လိုက်လေဗျာ-လို့ ဆိုရမယ့် အခန်းတွေ ရှိသလို ဇတ်နာအောင် သာသာထိုးထိုးလေး လုပ်ထားတာတွေလည်း ပါတယ်လို့ ပြောရမှာ ပါပဲ၊ ဒါဟာ ခံစားမှုကို ဦးစားပေးတဲ့ ရုပ်ရှင် မဟုတ်လား...၊
ဇတ်လမ်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းတစ်ခု ဖြစ်သလို ကျနော်လည်း အကြိုက်ဆုံး ဇတ်ဝင်ခန်းကတော့ အမေစုကို နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ပေးတဲ့အခန်းပါပဲ၊ အော်စလိုမြို့က ဆုပေးပွဲ ခန်းမ၊ အခမ်းအနား အပြင်အဆင်မှ စပြီးတော့ နောက်ဆုံး ဆုလက်ခံ ယူတဲ့ မိုက်ကယ်လ်အဲရစ်စ်၊ အလက်ဇန်းဒါးနဲ့ ကင်မ်တို့ ရပ်နေတဲ့ ပုံစံ အနေအထား အသေးစိတ်ကအစ ဂရုစိုက်ထားတာ သတိထား မိတယ်၊ တဖက်ကလည်း ရန်ကုန်က အိမ်ကြီးထဲမှာ အမေစု တဖြစ်လဲ မီရှဲလ်ယိုးက ရေဒီယို အဟောင်းကြီး တစ်လုံးကို နားထောင်နေတယ်၊ သူ့ကိုယ်စား မိသားစုကို ဆုလက်ခံယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ချိန်မှာပဲ မီးပြတ်သွားတယ်၊ သူနဲ့အတူ ရေဒီယို နားထောင်နေတဲ့ အဖော် အမျိုးသမီးက ရေဒီယိုအသေးလေး ပြေးယူတယ်၊ အဲဒီအချိန် အခမ်းအနားကို လွတ်သွားမှာစိုးလို့ အမေစုက စိတ်လှုပ်ရှား နေတယ်၊ ရေဒီယို ရောက်လာတော့ အထဲမှာ ဓါတ်ခဲ မရှိပြန်ဘူး၊ အဲဒါနဲ့ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးထဲက ဓါတ်ခဲတောင့်တွေထုတ်၊ ရေဒီယိုထဲ အမြန်ထည့်ပြီး ဖွင့်နားထောင် လိုက်တော့ သားကြီး အလက်ဇန်းဒါးက ကျေးဇူးတင်စကား ပြောနေခဲ့ပြီ၊ အမေစုကတော့ သားရဲ့အသံကို မျက်ဝန်းတွေ တလက်လက်နဲ့ နားထောင် နေတယ်၊ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောအပြီးမှာ ဂုဏ်ပြုအော်ခက်စထရာက တေးသွားတစ်ပိုဒ်ကို တီးမှုတ်လိုက်တယ်၊ ကျနော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ Pachelbel Canon တူရိယာသက်သက် တေးသွား..၊ စန္ဒရားနဲ့ ချယ်လိုကို အားပြုထားတဲ့ တေးသွား...၊ အဲဒါကို ရေဒီယိုကနေ ကြားရတဲ့အခါ အမေစုက တဖက်ကနေ စန္ဒရားကို အသာအယာ လိုက်တီးပါတယ်..၊ မိသားစုနဲ့ ဝေးပြီး တစ်ဦးတည်း ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ စိတ်ဓါတ်မာကျော ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကတော့ ညအမှောင်ထဲ စန္ဒရားခလုတ်တွေကို အသာအယာ တို့ထိလို့...၊ အဲဒီမြင်ကွင်းကို အလင်းအမှောင် နိုင်နိုင်၊ နောက်ခံဂီတ အားကောင်းကောင်းနဲ့ ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အခါ အမျိုးစုံတဲ့ ခံစားမှုတွေက ရင်ဘတ်ထဲမှာ ပြည့်ကျပ် လာတော့တယ်၊
ကျနော် ပြန်ပြောချင်တဲ့ နောက်တစ်ခန်းကတော့ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သိပ်မနေရတော့မယ့် အကြောင်း ရေးထားတဲ့ မိုက်ကယ်လ်အဲရစ်စ်ဆီက စာကို ဖတ်အပြီးမှာ ဗြိတိသျှ သံရုံးကတဆင့် အမေစုက ဖုန်းဆက်တဲ့ အခန်းပါ၊ အသံလှိုင်းတွေ သိပ်မကြည်တဲ့ ဖုန်းကို မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ဝဲပြီး ပြောတဲ့အခန်း...၊ 'ကျမ ပြန်လာဖို့များ လိုနေမလားဟင်' ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ပြောချလိုက်တဲ့ မီရှဲလ်ယိုးရဲ့ မျက်နှာမှာ အရိပ်တွေ အများကြီး ဖြတ်ပြေးသွားတယ်၊ မိသားစု၊ သေကောင်ပေါင်းလဲ ခင်ပွန်း၊ နောက်ဆုံးကြားခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ့် အသံ၊ အချုပ်အနှောင်၊ သောက၊ ပြည်သူလူထု၊ ဒုက္ခဆင်းရဲ... အဲဒါတွေ အကုန်လုံးကို အဲဒီ စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာ မီရှဲလ်ယိုးရဲ့ မျက်နှာမှာ တွေ့လိုက်ရတယ်၊ ရင်နင့်ရတဲ့ အခန်းပါပဲ၊ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ရုံထဲမှာ ကျနော့်ဘေးက မအိမ်သူလိုပဲ တိတ်တဆိတ် ရှိုက်သံတွေ ကြားနေရတယ်..၊
သရုပ်ဆောင်တွေ အဖြစ် မိုက်ကယ်လ်အဲရစ်စ်၊ အလက်ဇန်းဒါး၊ ကင်မ် တို့ရဲ့ ရုပ်သွင်၊ အမူအရာတွေ အတော်လေး တူပေမယ့် အမေစုရဲ့ ကာရိုက်တာကို ခံစားယူရတာတော့ လွယ်မယ့်အလုပ်လို့ ကျနော် မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အရပ်အမောင်း၊ မျက်နှာသွင်ပြင်ခြင်း ဆင်သလို ရှိတဲ့ အာရှ သူ မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုးက အတော်လေးကောင်းအောင် သရုပ်ဆောင်သွား နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် တချို့အခန်းတွေမှာ အမေစုရဲ့ အကြည့်ကို 'ဖမ်း' နိုင်တာ သတိထား မိတယ်၊ ဇတ်လမ်းထဲမှာ မျက်ရည်ဝဲတာ..၊ မျက်ရည်ကျတာတွေ ပါ,ပါတယ်၊ အမေစုကော.. အပြင်မှာ ဒီလိုမျိုး ရှိဖူးလား? ကရုဏာတရား ကြီးမားလှတဲ့ အဲဒီမျက်ဝန်းတွေ ထဲမှာ မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝဲနေတာ မြင်တွေ့ဖူးသူ မရှိသလောက် နည်းပါးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီတိုင်းပြည်ကို ချစ်လွန်းတဲ့ ဒီအမျိုးသမီးကြီး ဟာလည်း သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် မိသားစု အတွက် ငိုကြွေးရချိန်တွေ ရှိလိမ့်မှာ အသေအချာပါ၊ အနည်းဆုံး ရင်ထဲက နက်ရှိုင်းတဲ့ တစ်နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုကတော့ ခံစားမှုကို နှိုးဆွရမယ့် ရုပ်ရှင်ဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုး သာသာထိုးထိုး ရှိနိုင်တာ သဘာဝပါပဲ၊
ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်သစ်ဒါရိုက်တာ Luc Besson ကို အင်တာဗျူးတွေမှာ မေးကြတယ်၊ 'ခင်ဗျားရဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ကြည့်ခွင့်ရရင် ဘာပြောမယ်လို့ ထင်သလဲ'..တဲ့၊ သူက ဖြေတယ်၊ 'ဖြစ်နိုင်တာ နှစ်ခုပါပဲ၊ ဒေါ်စုက ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောပြီး ဖြစ်ရလေ Luc ရယ်..၊ မင်းမို့ ကြံကြံဖန်ဖန် ဒီလိုမျိုး စိတ်ကူးယဉ်တွေ စဉ်းစားတတ် ပလေတယ်-လို့ ပြောရင်ပြော..၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့မိသားစုရဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီး အောက်မေ့ သတိရစိတ်နဲ့ တိတ်ဆိတ်ချင်လည်း တိတ်ဆိတ် နေလိမ့်မယ်' တဲ့၊ တကယ်တမ်းမှာလည်း Luc Besson က ကံကောင်းစွာနဲ့ အမေစုကို လာတွေ့ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ သူက မေးလိုက်တယ်၊ 'အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဒေါ်စု ဒီဇတ်ကားကို ကြည့်ချင်သလား' ဆိုတော့ အမေစုက 'ကျမအတွက် အားရှိတဲ့ တစ်နေ့ကျရင် ကြည့်ဖြစ်မှာပါ'လို့ ပြန်ပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊
အနှုတ်လက္ခဏာ တစ်ခုကို ပြောပါ ဆိုရင်တော့ ဇတ်ကား အဆုံးသတ်ဟာ ကျနော့် အတွက်တော့ မချင့်မရဲ ဖြစ်ရပါတယ်၊ ဒီဇတ်လမ်းကို ရိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဇတ်သိမ်းဟာ happy ending မဟုတ်သလို tragic ending လို့လည်း မဆိုနိုင်တဲ့ အချိန်ပါ၊ (အခုထိလည်း ဒီနှစ်ခုထဲက တစ်ခုမှ မဟုတ်သေးပါဘူး)၊ ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ဇတ်သိမ်းဟာ အထိုက်အလျောက် ခက်မှာ သေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး ဇတ်သိမ်းပုံထက် ပိုပြီး အနုပညာ ဆန်မယ့် လုပ်ကွက်တွေ ရှိမယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါရိုက်တာမှာလည်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ ရှိမှာပါပဲ၊ မကောင်းဘူးလို့ ပြောရတာ လွယ်လွယ်လေးပါ၊ ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကို ခြုံကြည့်ရင်လည်း ဟာကွက်တွေ အများကြီးပါ၊ အထူးသဖြင့် အမေစုရဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု အသားပေး အခန်းတွေမှာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ရသလောက် သတင်းအချက်အလက် တွေနဲ့ပဲ သူများနိုင်ငံမှာ သိုသိုသိပ်သိပ်နဲ့ ဒီလိုမျိုး ရိုက်ခဲ့ရတာ ကျနော်တို့ မေ့ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး၊ ပြီးတော့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ရိုက်ကူးတဲ့ သတင်းမှတ်တမ်းကားလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီ နိုင်ငံရေးထဲမှာ တန်ဖိုးကြီးမား လှတဲ့ ပေးဆပ်၊ စွန့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ နေထိုင်နေတဲ့၊ လူတွေက ချစ်စနိုးနဲ့ 'The Lady' လို့ နာမ်စားသုံး ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ နှင်းဆီတစ်ပွင့် အကြောင်းပါ၊ ကျနော့်အတွက်တော့ ရင်ကိုလာမှန် ခဲ့ပါတယ်...။ ။
၅ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
Posted by ညီလင်းသစ် au 5.12.11 45 comments
Posted by ညီလင်းသစ် au 1.12.11 36 comments